Anuz Kulung's Blog: बोलेर कसैको जीबन बदल्न सकिन्छ भने बोलिदिनुहोस् ।
बोलेर कसैको जीबन बदल्न सकिन्छ भने बोलिदिनुहोस् ।
......नेपालमा अहिले सञ्जाल ब्याबसयको चलन बिस्तारै भित्रिरहेको छ । जहाँ कि मानिसहरु यसमा धेरैले कमाए पनि, कति त घर न घाटको भए पनि । कुरा यति नै हो कि नेपालमा यो ब्याबसयको बारेमा १०० प्रतिशतमा ३० प्रतिशतले मात्र बुझेको छ । यहाँ चलन छ पैसाको हुन त यो ब्याबसय पैसा कमाउनलाई पनि गरिन्छ तर यति मात्र हो कि ब्याबसय गर्न प्रोडक्टसँग निहित रहन्छ ।
यो ब्याबसय एउटा स्वतन्त्र ब्याबसय हो । जहाँ कि गर्न मन लाग्यो गर्न सकिन्छ गर्न मन लागेन नगरे पनि भयो । कमाई भईराख्छ । यो ब्याबसयबाट कमाउनलाई कोहि पनि मान्छेले मात्र धेरै कमाउन सक्दैन हरेक मानिसले उ आफ्नो समयमा दुःख गर्छ र कमाउन सफल हुन्छ । तर हामी अलि अबुझ छौ । आफु जब यो ब्याबसयमा भर्ना भइन्छ तब कोह आफ्नो माथिको मान्छेले कमाएको मात्र देखिन्छ । उसको हातमा चेक को चेक मात्र देखिन्छ तर उसले जब भर्ना गरेर त्यहाँ देखि उता काम गरेको संघर्षको चाहि अध्ययन नै गरिदैन अनि कहाँ बाट भइन्छ सफल । इश्र्या गरेर मात्र भएन त्यो माथिको मान्छेले गरेको संघर्ष जति आफुले पनि काम गरेर चेक खाने प्रण गर्नु प¥यो ।
अर्को कुरा म पनि यो ब्याबसयको एक हिस्सा बन्न पुगे । तर मैले नेपालमा भित्रिएको नाम चलेको सञ्जाल ब्याबसय चाहि गरेको छैन । युनिटि, गोल्ड क्वाइस्ट, रोबियस, हर्बो जति सुकै पनि छन् तर मैले हात हालिन । मलाई गर्ने हिम्मत पनि भएन । म अहिले पनि सतप्रतिशत नेटवर्क ब्याबसयमा अध्ययन मात्र गर्दैछु । नेपालमा जसको अलि धन र पैसा छ, त्यो मान्छेले यस्ता ब्याबसयमा लगानी गर्न डराउदैनन् त्यसले अगाडि लगानी गर्छ । त्यसपछि जब धनि धनि मान्छेहरु यो ब्याबसयमा लगानी गरे अझ धेरै पैसा कमाउछन् अनि पालो अलि धनि भन्दा कम ताकि मध्यम स्तरको मान्छेहरुले यो ब्याबसयको बास्ना थाहा पाउछन् अनि कमायो उनिहरुको पालो । अन्तिममा पर्ने त उहि हो न्युन स्तरको मान्छेहरु जो अलि बिकट ठाउँतिर भयो । उनिहरुसँग लगानी गर्ने आर्थिक अवस्था कम हुन्छ । उनिहरुसँग यो ब्याबयको बारेमा नीतिनियम पुर्बक काम गर्ने ज्ञान पनि अत्याधिक कम हुन्छ । अनि के भयो त ? मात्र उनिहरुसँग ज्ञान हुन्छ । १५००० तिरेपछि महिनाको तिन लाख कमाई हुन्छ । सोझो मान्छे सोझो बुझाई परेपछि गाई, भैसि, बाख्रा, बेचेर भए पनि भर्ना हुनु परेन । अब कसरी चल्छ त्यो सोझो बुझाईले यो ब्याबसय ।
त्यहि भएर पनि नेपालमा नेटवर्क ब्याबसय नचलेको । मैले अहिले भर्खरै केहि हप्ता अगाडि टेन्स भन्ने कम्पनिमा भर्ना गरेको छु । किनकी त्यो नेपालमा चल्ने र धेरै लामो समयसम्म टिक्ने सम्भावना पनि छ । हामीले यो ब्याबसयमा हाम फाल्दा कम्पनिको प्रोडक्टलाई ध्यान दिनुपर्छ जहाँ कि त्यो प्रयोग गर्दा हामीलाई फाईदा होस् । त्यसैगरी अरुलाई प्रयोग गर्न सल्लाह दिदा आम्दानी पनि । हामीले उनिहरुलाई त्यो कम्पनिको प्रोडक्टको बारेमा बोलेर उनिहरुले प्रयोग गरी फाइदा भई हामीलाई असिमित आम्दानी भयो भने किन नबोल्ने । बोलेर नै यो संसार टिकेको छ नि है न र ? महात्मा गान्धी, हिटलर, पण्डित, मदन भण्डारी जस्ता ब्यतिmहरु बोलेर संसार कति केके भयो । आज यो ब्याबसयको बारेमा बोल्दा र अरुलाई फाइदा हुदा किन नबाल्ने ।
सबै कुरालाई सकरात्मक रुपले हेर्न प¥यो । खाली इश्र्या गरेर मात्र भएन । संसारमा धनि मान्छेहरु मध्ये सबैभन्दा बढि मान्छेहरु नेटवर्क ब्याबसयीहरु छन् । अनि के उनिहरु भएर धनि भए त ? उनिहरुलाई कसैले ठगेको छ ? उनिहरुले गलत प्रोडक्टको प्रचार गरेको छ ? उनिहरुले परम्परागत ब्यापारलाई परिबर्तन गरेर सामुहिक रुपमा काम गरेको छ । यो नै हो नेटवर्क ब्यापार कसैले यो ब्याबसयको बारेमा गलत प्रचार ग¥यो भने समय कहिले पनि परिबर्तन हुन सक्दैन धेरै नै तल पर्छ ति ब्यतिmहरु ।
त्यहि भएर समय अनुकुल चल्न जरुरी छ । तपााईलाई एउटा अनलाइन सर्भे कम्पनिमा काम गर्न चाहनु हुन्छ भने सम्पर्क गर्नुहोस् नेपालमा बिस्तारै भित्रिदै छ । आफ्नो प्रति आजै सुरक्षित गर्नुहोस् ।
Posted by Pokhara News at 9:18 PM